Ps Tutorial by kppoelie
Posted by တောသားလေး at 8:16 PM0comments
Blur Text Tutorial
၁. www.tawthalay.blogspot.com ကိုဖွင့်ပါ။ ပုံပေါ်မှာ Left Click တစ်ချက်နှိပ်ပါ ပြီးတော့ ပုံကြီးပေါ်လာရင် Right Click , Save image as ကိုနှိပ်ပါ။ ကွန်ပျူတာထဲမှာ ကိုယ်မှတ်မိတဲ့နေရာတစ်နေရာကိုထားပါ ဥပမာ My Document.
၂. Photoshop ဖွင့်ပါ။ Ctr + O နှိပ်ပြီး သိမ်းထားတဲ့ပုံကိုပြန်ယူပါ။
၃. Ctr + J ကိုနှိပ်ပါ။ Layer ထဲမှာ, Layer 1 တစ်ခု Background တစ်ခု ပေါ်လာတာတွေ့ လိမ့်မယ်။
Note: ဘေးက Layer မပေါ်ရင် F7 နှိပ်ပါ။
၄. Layer ထဲမှာ Layer 1 ကို မျက်စိခဏဖြုတ်ပါ။ Background ပေါ် Left Click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Tool box ထဲက T ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးတော့ ပုံပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါ။ အဲဒီမှာ KAREN PEOPLE လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။ (Font – Impact, Size- 60)
၄. Layer 1 ကိုမျက်စိပြန်ဖွင့် keyboard ပေါ်မှာ Alt နှိပ်ထားပြီး Layer နဲ့Text အကြားတစ်ချက်နှိပ်ပါ။
၅. Text layer ပေါ်မှာ Right Click, Blending Option ကိုနှိပ်ပါ။
Posted by တောသားလေး at 9:57 AM0comments
Karen-English/English -Karen Dictionry
GRADE XII BLOGS
Grade XII Students ... Tawthalay Mya Yone Lwar Yaminnwe Hsa Ner Doo Thu Thu May Thidathan Aye Aye Aung Aye Mya Than Win Honey Cho Thwe Thwe Aung Aye Myint Paw K’ Mwee Eh Lwe Hsa P’ der Has Eh Soe Moo Kyaw Tharthaw Elizabeth Mu Dah Dah Moo Thaw Thaw Hsa Eh Bwey Moo Moe Min Win May Zin Min Thit Ennieta Yamin Nwe
Click here ... Myo Thaw Thi Ha Nu Nu Khin Tha Palin Paw Nang Zin Yuzana Hsa Paw Lai Nasa Ester Thein Hsa Moo Moo Mee Me Wide Horizons Students Sai Oo Ko Lo Nu Hlaing Mar Ko Sai Baw Reb Htoo Sai Yawd Daniel Kyi Nu Kyaw Thet Lah Hset Yonekalay Bailtal
ကရင်အမျိုးသားမိတ်သဟာရ အဖွဲ့ (ကိုးရီးယား)
Rememberance of P'doh Mahn Sha
ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး(ကိုးရီးယား)/ Karen Youth Organization(Korean)
Saw Nay Aye
Mother Land of Karen State
Taw Naw Mu Taw Bible College
စောကျော်လေး/Saw Kyaw Lay
ဇော်မင်းထွန်း/Zaw Min Tun
~~~~ Hotfile Premium accounts ~~~~
Download Latest Version 51.29MB